गोपाल पराजुलीमाथी ओलीको प्रश्न 'कुस्ती खेल्ने विषय हो यो ?'|Tapaiko Khabar
गोपाल पराजुलीमाथी ओलीको प्रश्न ‘कुस्ती खेल्ने विषय हो यो ?’
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : फागुन ३०, २०७४ Big News, मुख्य खबर, समाचार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा भएकाहरुको अवस्थाबारे बोलेका छन्
बुधबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले भने कतिलाई प्रधानमन्त्रीले न्यायालयबारे नबोले हुन्थ्यो भन्ने लागेको भन्दै उनले अघि भने, प्रधानमन्त्री एउटा नबालेर के हुन्छ र रु त्यहाँ न्यायालय भकभक उम्लिराख्या छ ।’
उनले हाँस्दै अघि भने, ‘अब के बोल्नु, के नबोल्नु ? बोलेर के हुने, नबोलेर के हुने ? बेञ्च बसेको छैन । न्याय पाउँ भनेर गएका मान्छे तमासा हेरेर पुर्पुरोमा हात लगाएर फर्किराखेका छन् ।’
उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश कहिले जन्मिएको देशले थाहा नपाउने । यो कुनै मल्ल युद्धको विषय हो रु कुस्ती खेल्ने विषय हो ?
यस भन्दा अगाडीओलीसँगै जेल बसेका गणेश बने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष (ब्याकग्राउण्डसहित)
यस पछिकांग्रेस नेता पौडेलको चेतावनी, ‘जुलुस लिएर कान्तिपुर आउनु पर्ला’